अष्ट्रेलिया फर्किइन् लक्की शेर्पा,अष्ट्रेलियामा पक्राउ पर्न सक्छिन् ! यस्ता छन् खतरा - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
प्रकाशित मिति: ३ माघ २०७५, बिहीबार January 17, 2019
अष्ट्रेलिया । अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत लक्की शेर्पाल अष्ट्रेलिया फर्किएकी छन्। एक महिनासम्म पनि आफ्नो विषयमा टुंगो नलागेपछि राजदूत लक्की शेर्पा अस्ट्रेलिया फर्किएकी छन्। अष्ट्रेलिया पुगेकी नेपालका लागि अष्ट्रेलियाकी राजदूत लक्की शेर्पालाई त्यहाँको सरकारले पक्राउ गर्न सक्ने खतरा छ ।
तेश्रो खतरा स्वदेश फर्कने क्रममा एयरपोर्टमै लक्कीलाई व्यक्तिगत रुपमा बेइज्जत गर्न सक्ने छ । गत वर्ष अमेरिकाले न्यूयोर्कस्थित भारतीय कूटनीतिज्ञ देवयानी खोप्रगोर्डमाथि सोही व्यवहार गरिएको थियो । देवयानी र लक्कीमाथि लागेको आरोप करिब उस्तै प्रकृतिको छ । देवयानीमाथि पनि घरेलु कामदारमाथि दुव्र्यवहार र यातना दिएको तथा पारिश्रमिक नदिएको आरोप लागेको थियो ।
सोही आरोपमा उनलाई अमेरिकाले देश निकाला गरेको थियो । भारत फर्कने क्रममा देवयानीलाई विमानस्थलका सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा जाँचका क्रममा सर्वाङ्ग नाङ्गो पारेर बेइज्जत गरेका थिए । भियना कन्भेन्सन अनुसार कूटनीतिज्ञको आचरण र नैतिकताअनुसारको व्यवहार नगर्नेमाथि त्यस्तै व्यवहार गर्ने गरिन्छ । पक्राउ गर्नु, गैरकूटनीतिज्ञको व्यवहार गर्नु तथा व्यक्तिगत रुपमा बेइज्जत जे गरे पनि मुलुककै प्रतिष्ठामा आँच आउँछ । यसैबीच सरकारले राजीनामा गर्न दिएको निर्देशन पालना नगर्ने लक्कीलाई राजदूतबाट बर्खास्त गर्ने तयारी अघि बढाएको दाबी परराष्ट्र उच्च स्रोतले गरेको छ
काठमाडौं । काठमाडौंका घट्टेकुलो, सुकेधारा र नागढुंगामा भएका विस्फोटन र केहीको मृत्युपछि अष्ट्रेलियाली […]
अष्ट्रेलियामा श्रम शोषणमा पर्नु भएको छ ? यसरी लिनुहोस् नि:शुल्क कानुनी सहायता
सिड्नी । अष्ट्रेलियामा रोजगारदाताले जानीजानी आफ्नो कामदारलाई कम पारिश्रमिक दिए जेल जानुपर्ने भएको छ। […]